router Archives - SmartMe
Dom » Gelitaannada lagu calaamadeeyay "router"
ONT ee Orange - internetka ayaa ugu dambeyntii aniga ii shaqeynaya!
Waxa daabacay	Ariel
ont, orange, router
Maqaalkani wuxuu u heellan yahay Grzesiek ee HejDom. Isagu wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee tooshka ku ifiya wax sida ONT ee Orange, taas oo ugu dambayn igu kaliftay inaan hagitaankan kuu qoro aniga oo dhoola cadeynaya. Waayo halkan waa laba ...
TP-Link wuxuu soo bandhigayaa nidaamka mesh-ka 'Deco X90'
Waxa daabacay	Paweł M.
qurxin xc90, router, network wireless, tp-link, wi-fi mesh, wifi
Tirada joogtada ah ee aaladaha casriga ah ee gurigeenna ku sii kordhaya waxay u baahan tahay xiriir internet daggan oo deg deg ah. TP-Link wuxuu la kulmaa rajooyinka macaamiisha wuxuuna suuqa ku soo bandhigaa nidaamka mesh seddex-geesood ah ee Deco X90, kaas oo taageeraya heerka ...
News, Hoyga Xiaomi
Xiaomi Router AX3600 oo leh Ingiriis!
AX3600, router, xiaomi
Ugu dambeyntii! Haddii aad haysato qalabka ugu awoodda badan ee loo yaqaan 'Xiaomi router' - AX3600, waxaan kuu haynaa war wanaagsan :) Ka dib oo dhan, marka lagu daro Shiinaha, waxaad awoodi doontaa inaad daarto luuqadda Ingiriiska! Ruter wuxuu helay software caalami ah. Xiaomi Router AX3600 waa router-ka ugu awooda badan ...
dib u eegista, Hoyga Xiaomi
Xiaomi Mi AIoT Router - Dib u eegista fiidiyowga ee Xiaomi AC2350 router oo leh AIoT
ac2350, mi aiot router, router, xiaomi
AC2350 Router waa kii ugu dambeeyay ee loo yaqaan 'Xiaomi Router' oo leh AIoT. Muxuu ku fiican yahay maxaase la hagaajiyaa? Fiiri fiidiyowgeena!
Internetka, Xiaomi, router, AIoT, i.e. Xiaomi AC2350 dib u eegis
Waxa daabacay	Daniel
ac2350, router, xiaomi
Waan helnay! Weli diirimaad, ku dhawaad ​​toos toos ah oo cajaladda ah. Mid ka mid ah alaabada cusub ee been abuurka ah ee aan wada ognahay shirkada oo leh laba xaraf MI. Xiaomi AC2350 Mi AIoT router. Lix anteeno oo loogu talagalay Wi-Fi, midna waa AIoT, ...
Router-ka cusub ee 'Xiaomi router' wuxuu bixiyaa wax badan oo aad u yar (WiFi 6, Mesh iyo inbadan)
ax1800, router, xiaomi
Sidii la filayay, shalay Xiaomi waxay soo bandhigtay router-keedii ugu dambeeyay. AX1800 waa Mesh router-ka oo ay ka buuxaan teknolojiyad cusub oo qiimahoodu ka yarayn doono PLN 200. Aynu ku bilowno WiFi 6. Waa halbeeg mar horeba ...
Huawei ayaa siideysay router-ka NFC. Maxaa loogu talagalay? Iska eeg naftaada
11 Janaayo 2020
huawei, Nfc, router
Maanta waa maalin muhiim u ah Huawei, oo soo saartay alaabo badan hal mar. Midkood waa router, oo aan ahayn aalad caadi ah haba yaraatee. Waa router leh teknolojiyadda NFC. La kulan Huwawei A2! Immisa jeer ...
New Orbi Routers oo ka socota Netgear
mesh, netgear, orbi, router
Netgear ayaa siidaysay gawaarida mesh-ka cusub ee taxanaha Orbi. Alaabooyinka cusub ee Orbi waxaa lagu heli karaa laba, saddex ama afar-pack, waxaana loogu talagalay inay daboolaan aag dhan 500 mitir oo laba jibbaaran. Waxa kale oo lagu gartaa si buuxda ...
Ding dong ... oo waxba ma arki kartid - Xiaomi Doorbell 2 Lite dib u eegis
Albaabka Netatmo - Albaabka Smart ee HomeKit!
Dalab gaar ah oo loogu talagalay taageerayaasha VR, ciyaaraha iyo heshiisyada wanaagsan kaliya illaa Maajo 31, 2021.
ASSA ABLOY waxaa ka go'an inay hirgeliso halbeeg isku xirnaanta cusub - Arrin